Tora mukana we1GB mahara neiyo My Vodafone app | IPhone nhau
Mhinduro dziri muApp Store pane odha yezuva. Imwe yeanonyanya kufarirwa uye anoshanda nhare mbozha manejimendi manyorerwo ndeye My Vodafone. Nayo, isu tinokwanisa kuita zvisingaverengeke zvine chekuita nemaitiro, kwete chete neyedu nhare mbozha, asi nechero chigadzirwa chatakatenderana neVodafone. Nekudaro, zvinoita sekunge munguva pfupi yapfuura kubatana kwe4G hakuna kuenda sezvazvinofanira kuita mumitsetse yeVodafone, saka Nekuda kwekuvandudzwa kwazvino kwekushandisa kwavo, vafunga kupa vashandisi 1GB yekubhurawuza kwezuva rese. Tora mukana wekuti hapana kumbove newakawanda kwazvo marongero edata.
Chekutanga pane zvese, isu tichaenda kunotaura nezve maficha manyowani ekushandisa, pakati pavo, ikozvino tinogona kutarisa kana kufamba kweye nharembozha yedu kuri chaizvo padanho renharembozha, pamwe nekugadziriswa kwakawanda. Iko My Vodafone application yafambira mberi zvakakwana, kwete kare kare, kuifamba kwaive kusingakwanise.
Chii Chitsva muVhezheni 3.6.7
Iye zvino unogona kutarisa kumhanyisa kubhurawuza kwako foni mbozha.
Uye zvakare, kana iwe wakamboona chero chiitiko neVodafone 4G Network, tinokubhadharisa ne1GB yemahara. Unogona kuikumbira mu "Yakavimbiswa 4G network" module mune "Mamwe masevhisi" chikamu.
Iyi yazvino vhezheni inongobata 5.9 chete uye inoenderana nechero chishandiso chine iOS 7.1 kana gare gare yakaiswa. Sezvaunenge uchitoziva, Kuti tikumbire 1GB yemahara yekufambisa, isu tinofanirwa kuenda kune "Mamwe masevhisi" chikamu chemenu kuruboshwe., uye ipapo tichawana chigadzirwa chavachatipa kwezuva. Zvichakadaro, isu tichakamirira iko kunyorera kuti tivandudze chimwe chinhu, kufamba kuburikidza nacho kunononoka uye kusatsungirira zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Iwe unoziva, tora mukana we1GB mahara kana uchibva kuVodafone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tora mukana we1GB mahara neiyo My Vodafone app
Ziso! yakawanda yekuvandudza yevodafone yangu uye mamwe masevhisi (aya mamwe masevhisi euphemism) nekuti zvinoitika kuti kubva 18th masevhisi ako achawedzera, EHE! Asi zvinoitika kuti ivowo vari kuzowedzera mwero we € 3,00, saka nekuti ini ndakakodzera, zvinonyadzisa kuti iwe unofanirwa kupinda mukati mukushandisa, kuitira kuti vakuudze kuti urikubhadhara € 42 € 45 ini handioni zviri pachena uye zvechokwadi ndichaikanganisa.
Nenzira, ndatenda Miguel nechikwata chese nekutumira kwako.
Pindura kuna St.
Manuel Galvez Cortes akadaro
Ivo vakachinja mwero wangu, ndakadana nezuro kushamisika kwangu uye vanondiudza kuti vakanditumira SMS, email, uye tsamba! uye kuti ndaive nenhambo yepamutemo yemwedzi mumwe chete kuti ndidzike kune yakaderera mwero pasina chirango ... Zvakanaka, hapana munhu akandiudza ...
Pindura Manuel Gálvez Cortés
Kana iwe usina zvachose, fonera iyo yekudzima sevhisi, ivo vanokupa iwe chipo chausingakwanise kuramba. Ini ndaizoenda kubva ku42 kusvika ku45 senge iwe, uye ndakazopedzisira ndabhadhara makumi matatu nemasere.